नयाँ शक्तिपनि एमालेमा बिलय हुने, अन्य साना दललाई पनि मिलाउने प्रक्रिया तीब्र !
ARCHIVE, POLITICS » नयाँ शक्तिपनि एमालेमा बिलय हुने, अन्य साना दललाई पनि मिलाउने प्रक्रिया तीब्र !
काठमाडौँ- नयाँ शक्ति नेपाल पनि एमालेमा बिलय हुने भएको छ । नयाँ शक्तिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई सूर्य चिन्हबाट अहिलेका लागि चुनाव लड्ने र पछि पार्टी एकता हुने सहमति भएसँगै नयाँ शक्ति पनि एमालेमा बिलय हुने भएको हो ।
यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रले एमालेसँग पार्टी एकीकरण गरेर अगाडी बढ्ने निर्णय गरेको थियो ।